သစ်သားရေပူကန် | BadeBOTTI.CH – ဆွစ်ဇာလန်မူရင်းကတည်းက 2004
ကနေဒါ NATURA ကိုလှည့်လည်သည်, သီးသန့်ကနေဒါအနီရောင်အာရဇ်သစ်သား၏ဂန္ဒီဇိုင်းကို.
အာရဇ်ပင် Hot Tubs ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအနီရောင်အနောက်တိုင်းအာရဇ်ပင်အာရဇ်သစ်သား၏လုပ်နေကြသည်. သစ်သားဒီအမျိုးအစားဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပုပ်မှ၎င်း၏ခုခံ၏ထူးခြားသောဖြစ်ပါသည်.
အတော်လေးသာယာသောနှင့်အဟာရကိုသင့်ကိုသဘာဝရနံ့. အဆိုပါမျှင်များကို structure ကိုဆုံးရေတင်းကျပ်စွာသေချာနှင့်ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးကိုယျတိုငျကာကှယျသစ်သားမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်.
အဆိုပါသစ်သားရေပူကန်အရွယ်အစားအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် 152, 182 und 214cm Durchmesser erhältlich und bietet Platz für 4-8 လူထု.
စံ version ကိုအားကောင်းတဲ့ပြင်ပတွင် woodstove တပ်ဆင်ထားပြီး.
ထို 10cm ထူ Isolierdeckels ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှရေကိုရက်ပင်ပူနွေးကမ္ဘာမှာဆန်စပါး. Wir empfehlen dadurch eine Zusatzheizung Elektro, အရာသာယာသော 38 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှရေချိုးရေစောင့်ရှောက်.
(5,819 ဒီ post ကိုကြည့်ရှုပြီးမှအဘယ်သူသည်ဧည့်သည်များ)
24. February 2018 မှာ 21:13
28. February 2018 မှာ 1:59